Iinketho ezi-5 zokutshintsha imephu yekhibhodi kwiWindows | Iindaba zeGajethi
Iindlela ezi-5 zokutshintsha imephu yebhodi yezitshixo kwiWindows
Xa sele sifumene ikhompyuter yakho kunye neWindows iqwalasela inani elithile lezitshixo ngokwahlukileyo, ngeendlela ezincinci zokulandela kwaye ngendlela elula kakhulu, siya kuba nethuba lokubeka imephu yebhodi yezitshixo ngokuchanekileyo. Oku kufuna kuphela ukuguqula indawo ekuyo, enokwenziwa ngaphandle kwengxaki enkulu kuseto lwengingqi kwiphaneli yokulawula.
Kodwa Kwenzeka ntoni ukuba sifuna ukwenza izinto ezahlukeneyo ngezitshixo ezithile? Ezi ntlobo zemisebenzi zihlala ziqwalaselwe sisicelo esisebenza ngaso ngexesha elithile, imeko engafaniyo ukuba endaweni yoko sifuna inyathelo elahluke ngokupheleleyo kwidesktop enye yeWindows. Emva koko siza kukhankanya izixhobo ezi-5 onokuzisebenzisa ngale njongo, ezisebenza ngokukodwa kwiWindows.
1 1. Isitshixo
2 2.Iiklip zeSharp
3 3. ImephuKeyboard
4 4. Imephu ephambili
5 5. UMyili weKhibhodi yokuBekwa kweMicrosoft
Como enye indlela yokuqala Siza kukhankanya esi sixhobo; Nje ukuba uyiqhube, kuya kufuneka uqale ucwangcise ukuba yeyiphi eyona misebenzi ibalulekileyo ofuna ukuyinika isitshixo okanye indibaniselwano yazo ngokusebenzisa ujongano lwayo.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukhetho lwesitshixo ofuna ukusiguqula; emazantsi endaweni yoko uya kufumana imenyu encinci yokuwa ezantsi izokunceda ukhethe utshintsho ofuna ukulwenza. Emva kwexesha kuya kufuneka uyisebenzise ukuze yonke into ibhaliswe. Ungasebenzisa izikhokelo zesampulu ezimbalwa ukufeza lo msebenzi, into efunyenwe kwicala lasekunene. Ukuba ngasizathu sithile wenze ulungiso olubi, kuyakufuneka ukhethe kuphela kwiqhosha phezulu eliza kukunceda "ukubuyisela kokungagqibekanga" kwimephu yebhodi yezitshixo.
Como enye yesibini Siza kukhankanya esi sicelo. Sele inonxibelelwano oluntsonkothileyo kancinci, apho unokuncoma inani elahlukileyo leendlela ezimfutshane esinokuthi sizisebenzisele isenzo esahluke kwaphela kwesokuqala.
Owona msebenzi uphambili wale sicelo kukubuyisela (kwezinye, ukuhambisa) imisebenzi ethile kwezinye iintlobo zokudityaniswa kwezitshixo. Kukho iindlela ezahlukeneyo zokusetyenziswa, eziya kuxhomekeka kwisidingo ngasinye.
Esi sicelo inokufana okuncinci kwisixhobo esikhankanye kuqala (ekuqaleni). Ujongano lomsebenzisi luyathandeka ngakumbi, eyona nto ibaluleke kakhulu yindlela osebenza ngayo xa utshintsha isabelo esingundoqo sokwenza umsebenzi owahluke ngokupheleleyo.
Nje ukuba usebenze usetyenziso kwaye uyayibona ikhibhodi kwiscreen sokujonga, kuya kufuneka ukhethe isitshixo ofuna ukutshintsha ukusebenza. Ezantsi ngasekhohlo, iinketho ezimbalwa ziya kuvela, apho kuya kufuneka ukhethe leyo ufuna ukuyenza ngeqhosha elikhethwe ngaphambili.
4. Imephu ephambili
Ngemisebenzi enomtsalane ibonakalisiwe kwesi sixhobo; inethuba lokutshintsha isenzo esabelwe isitshixo esahluke ngokupheleleyo. Ukongeza koku, umsebenzisi unokukhubaza ukusebenza kwalo naliphi na iqhosha ngokupheleleyo.
Ukwenza oku, kuya kufuneka ukhethe isitshixo kwaye usitsale ngaphandle kwebhodibhodi, ngelo xesha iya kuba grey emnyama. Unokucofa kabini nakweliphi na lamaqhosha akhoyo ukwenza ulungiso olukhethekileyo xa kubonakala iipropathi zeefestile.
5. UMyili weKhibhodi yokuBekwa kweMicrosoft
Ukuba ungumphuhlisi onokufuna zama esi sixhobo; inika ithuba kubasebenzisi bayo, yenza isitshixo esitsha ngokupheleleyo, Oko kuthetha ukuba umntu ngamnye angabelwa into eyahluke mpela kuleyo ibicingelwe ngaphambili.
Nangona ezi ntlobo zeempawu zinokusetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo zomsebenzi, abo basebenza njengesoftware ekhethekileyo yokuhlela ividiyo banokufumana uncedo olukhulu kuyo. Uqwalaselo lwebhodi yezitshixo lunokutshintshwa ukuze imisebenzi ethile idityaniswe namaqhosha ayo, into enokuthi ibandakanye ukhetho lokusika ividiyo, ukuyidlala, ukunqumama, ukuthumela ukuba ibe "kukunikezela" phakathi kwezinye iindlela ezininzi kunye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Iindlela ezi-5 zokutshintsha imephu yebhodi yezitshixo kwiWindows
Eyokuqala yandisebenzela: D!
Ngaba ikhona enye indlela ye-mac?
Izixhobo ezi-4 zokuhlangula idatha kwiCD eyonakeleyo nekrwitshiweyo
Ungakukhubaza njani ukudlala ngokuzenzekelayo kweCD / DVD ROM